jeudi, 26 septembre 2019 09:15
Fihenan-danjan'ny Ariary: Nampiantso manokana ny Governoran'ny Banky Foibe ny Filoham-pirenena
Nodinihina tamin’izany ny anton'io fihenan-danjan'ny Ariary io, izay voalaza fa anisan'ny antony mampiakatra ny vidin'entana. Noraisina nandritra io fihaonan’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny Governoran'ny Banky Foibe, Rasolofondraibe Alain, io ny fanapahan-kevitra amin'ny stratejia izay apetraka hanarenana izany sandam-bola malagasy izany ao anatin'ny fotoana fohy.
jeudi, 26 septembre 2019 08:55
Vidin'entana PPN: Asiana "Prix de référence"
Araka ny tori-marika napetraky ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina, nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny 25 septambra, manoloana ny fidangan'ny vidin'entana, dia hampanantsoin'ny minisitry ny varotra sy ny indostria ireo orinasa mpamokatra eto an-toerana, sy ireo mpanafatra entana, ka ny ministera no hamoaka ny vidin'entana tombana na "prix de référence", miainga amin'ny kajy izay hatao, mifototra amin'ny vidin'entana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, ny saran'ny fanafarana sy ny haba isan-karazany, izay vidiny ampiharina eny an-tsena. Asiana ihany koa fanaraha-maso ny vidin'entana eny an-tsena.
mercredi, 25 septembre 2019 15:24
Tahirin-tsary Gasypatriote sy Banky Foibe
Vola vaovao Malagasy: Roa taona izao ny nivoahany, mbola miasa ihany ny teo aloha
Tamin'ny 17 jolay 2017 no navoakan'ny Banky Foiben'i Madagasikara hanankery eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara ny ravim-bola vaovao 20 000Ar, 10 000Ar, 5 000Ar ary 2 000Ar. Ny volana septambra 2017 kosa ny vola 1 000Ar, 500 Ar, 200Ar ary ny 100Ar. Roa taona katroka izao no navoaka ireo vola vaovao ireo.Mbola manan-kery avokoa hatreto ireo vola nivoaka tamin'ny 2003. Karazam-bola roa no mihodina eny an-tsena. Ny fanjakana tsy nametra ary tsy hita taratra ny ezaka te hanolo ilay vola teo aloha, na ny fitondrana teo aloha namoaka ny vola, na ny fitondrana ankehitriny nandimby.
mardi, 24 septembre 2019 22:19
Menaka fihinana: Ilay tataon-ketra 21% nataon’ny Fanjakana no nampiakatra ny vidiny
Mimenomenona ny mpanjifa manoloana ny fidangan’ny vidi-menaka fihinana tato ho ato. Nilaza ny orinasa HITA (Huilerie Industrielle de Tamatave), iray amin’ireo mpamokatra menaka fihinana eto Madagasikara, fa efa herintaona no tsy niovana fa 3200 Ariary ny litatry ny menaka vokarin’izy ireo, ary tsy mbola mieritreritra ny hampakatra vidi-menaka fihinana ny orinasa amin’izao fotoana izao. Niaiky ny Fanjakana fa nisy fiantraikany tamin’ny vidin’entana ilain’ny olona teny an-tsena ny politika nampiharina ho fiarovana ireo entana vokarika ato anatiny, toy ny savony, paty, dibera, menaka fihinana, menaka ho an’ny fiara, izay notataovana hetra 19% ka hatramin’ny 34% ; tatao 21% ho an’ny menaka fihinana. Fanapahan-kevitra nihatra nanomboka tamin’ity volana septambra 2019 ity. Niverina tamin’ny heviny ny Fanjakana manoloana ny fimenomenoman’ny olona noho ny fiakaram-bidin’ny entana ilainy andavanandro, ka dia nofoanana ireo tataon-ketra ireo.
lundi, 23 septembre 2019 20:56
Sary nindramina fampiaingoana
Fantatrao ve: Ahoana ny fikajiana ny vidin'ny entana amidy
Toy izao ny firafitry ny vola miditra sy mivoaka ao anatin'ny orinasa salama iray. - CA (Chiffre d'affaire, na ny vola maty, recette): 100 - Charge fixe (hofan-trano, JIRAMA, téléphone, déplacement, assurance, fourniture de bureau...): 30 - Matière première ou marchandise (Vidin'entana na akora vokarina): 30 - Salaire et charge sociale - Taxe IRSA - CNAPS - Santé (karaman'ny mpiasa): 30 - Bénéfice brut avant impôt (tombom-barotra alohan'ny hetra): 10 - Bénéfice Net (tombom-barotra afaka hetra): 5% - Taxe Etat (Hetram-panjakana aloa): TVA 20% + 20% impôt sur le revenu.
lundi, 23 septembre 2019 20:15
Menaka fandrahoan-tsakafo: « Tsy avy aminay no mampiakatra ny vidiny », hoy ny orinasa HITA
3 200 Ariary ny litatra amoahan’ny orinasa HITA (Huilerie Industrielle de Tamatave) ny menaka fandrahoan-tsakafo vokariny. « Efa ho herintaona izao io vidin’ny menaka miainga any am-potony io», ary « tsy mbola mieritreritra ny hampakatra vidin’ny menaka ny orinasa amin’izao fotoana izao», hoy ny tompon’andraikitra eo anivon’ny orinasa iray mpanamboatra menaka fihinana ity. « Miezaka ny mamaly ny tinady amin’ny vokatra menaka ny orinasa HITA, ary tsy mbola ao anatin’ny vinavinan’ny orinasa ny fampiakaram-bidy », hoy hatrany ny tompon’andraikitra manoloana ny fitarain’ny mpanjifa amin’ny fiakaran’ny vidin’ny menaka fihinana eny an-tsena. Nisokatra tamin’ny taona 2001 ny orinasa HITA ary mamokatra menaka« palme », « soja » sy « tournesol ». Mampiasa olona 400 mahery ny orinasa ankehitriny. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 23 septembre 2019 20:02
« Sciences économique et sociale »: Taranja vaovao hianarana eny anivon’ny lisea
Taranja vaovao hampidirina ao amin’ny fandaharam-pianarana eny anivon’ny lisea amin’ny taom-pianarana ho avy io ity « Sciences économique et sociale » ity. Misy nanomboka androany 23 septambra 2019, eto Antananarivo, ary haharitra dimy andro ny fanofanana ireo mpampiofana mikasika io taranjam-pampianarana vaovao io. Misy solontena mandray anjara amin’ity fiofanana ity avokoa ny faritra rehetra manerana ny Nosy. Ny masoivohon’i Frantsa no mamatsy vola izao fanofanana izao. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 23 septembre 2019 20:01
Tetikasa « Fihariana »: 3 210 ny fangatahana nahafeno fepetra ka efa eo am-pelatanan’ny banky
89 096 ny antontan-taratasy voarain’ny tompon’andraikitry ny tetikasa « Fihariana » hatramin’izao volana septambra 2019 izao. Avy ato amin’ny Faritany Antananarivo ny 30 688 tamin’ireo fangatahana famatsiam-bola amin’ity tetikasa ity ; avy ao amin’ny Faritany Toliara ny 21 656 ; avy ao Toamasina ny 15 827 ; avy any Fianarantsoa ny 10 598 ; avy ao Mahajanga ny 8 319 ary avy ao amin’ny Faritany Antsiranana ny 2 008. Efa nandalo ny sivana rehetra mialohan’ny farany ny sasany amin’ireo, ary eo andalam-pikirakirana kosa ny hafa. Hatreto dia miisa 3 210 ireo fangatahana voalaza fa nahafeno ny fepetra rehetra ho an’ireo izay efa nandalo ny sivana, ary efa eo am-pelatanan’ireo banky miara-miasa amin’ny tetikasa ny fangatahana amin’izao fotoana izao.
lundi, 23 septembre 2019 12:38
Ampanefena-Vohémar: Tafakatra 10 000Ar ny litatry ny lasantsy
Efa hatramin’ny alakamisy 19 septambra lasa teo no lany ny solika tamin’ny toby mpaninjara eto Ampanefena. Filaharana izay tsy izy io maraina io, miandry solika, satria izay tonga lany eto amin’izao. Any amin’ny varomaizina vao mahita. Nanararaotra ireo mpivarotra lasantsy any anelakelan-trano noho io tsy fisian’ny solika io ; tafakatra 10 000 Ar ny farany ambany ny iray litatra vao lany kely ny eny amin’ny toby mpaninjara. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 20 septembre 2019 11:07
PPN: Mitobaka eny an-tsena fa ny mpanjifa no malaina
Maro tokoa ary azo isafidianana ireo entana ilaina amin'ny fiainana an-davan'andro (PPN), raha ny eto Antananarivo renivohitra no resahina. Tsy manam-bola ny olona hoy ireo mpivarotra, ka na, be ady varotra, na ahenany ny entana fividiny isan'andro. Misarika ny sain'ny mpitondra ireo mpivarotra, fa anisan'ny mampiakatra ny vidin'entana ny saran'ny ladoany amin'ny entana afarana, satria nahitana fiakarany izany haba izany raha ny filazan'ireo mpamongady (grossiste). Misy fiakarany 10-25% eo ny vidin'entana ankehitriny, raha tsy dia nihetsika firy kosa ny vidim-bary. Efa miroso amin'ny fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra ihany koa izao ny Ray aman-dreny. (Jereo Sary Tohiny)